I-Semalt: Indlela & Kungani Ukuvimbela Ulimi Ugaxekile Ku-Google Analytics ne-WordPress
Kuyathukuthelisa kakhulu abasebenzisi be-WordPress nabasebenzisi be-Google ukuthi bathole ithrafikhi yogaxekile nokubukeka okungalungile emakhasini abo ewebhu. Kuthatha isikhathi esiningi ukudala nokwenza kusebenze izihlungi, futhi abantu abaningi abazi ngisho nokuvimbela imithombo yomgwaqo engadingeki kwi-intanethi. Eziningi zazo zijwayele ukubhekana nokugaxekile okuthunyelwe, njengoba kungenye yalezi zinto eziye zahlasela izingosi zethu izinyanga.
Nokho, emavikini ambalwa adlule, amasu namasu amasha amasha asetshenziselwe ukuqeda ugaxekile kwi-intanethi. U-Ivan Konovalov, onguchwepheshe oholayo uSemalt , uxoxe ngakho kulesi sihloko. Ngaphambi kokuba siqale, ake sikhulume kancane ngolimi ogaxekile.
Isingeniso solimi logaxekile
Ukugaxekile kogaxekile kusho ukuchitha idumela lakho kanye nesimo sakho sewebhusayithi injini yokusesha imiphumela. Ugaxekile lolimi, ngakolunye uhlangothi, kuyindlela esetshenziswa abakwa-spammers ekukhuthazeni amawebhusayithi abo kanye namaphrofayela womphakathi wezokuxhumana. Ezinye zezibonelo zogaxekile zolimi ziyi-Reddit, i-lifehack, i-motherboard, ne-thenextweb. Abakwa-spammers bathola amasayithi abo ababhalisiwe kulezi zingxenyekazi futhi bathumele ukubukwa okungalungile kumasayithi akho ngenani elikhulu. Bahlose ukubhubhisa isayithi lakho futhi basebenze kahle kwi-intanethi.
Vimbela ugaxekile lolimi
Esinye sezizathu eziyinhloko zokuvimbela ugaxekile lolimi ukuthi lokhu kungabhubhisa isimo sakho sesayithi kwimiphumela yokusesha injini..Ngisho noma usuyenzile iqoqo elimhlophe le-SEO futhi uchitha isikhathi esiningi ekubhaliseni izihloko zakho, ugaxekile lolimi lungakukhohlisa futhi lubhubhise yonke into ngaphandle kwesikhathi. Kungenzeka ukuthi akunakwenzeka ukuba ubani abahlungile ku-Google Analytics, yingakho kufanele uzilahle noma uzivimbe ngesandla.
Ukuvimbela ugaxekile kolimi ku-Google Analytics
Kunamathuba ambalwa okumele ukhumbule uma ufuna ukuvimba ukugaxeka kolimi ku-Google Analytics ne-WordPress. Indlela elula futhi elula kakhulu ukufaka i-plugin ye-WordPress. Ngaphandle kwalokho, ungazama lokhu okulandelayo:
# 1. Dala izihlungi ukuvimba ugaxekile kolimi
Okokuqala ukwenza izihlungi zokuvimbela ugaxekile kolimi ku-Google Analytics. Ungakha izihlungi eziningi ngokusekelwe ezimfuno zakho futhi ungafaka eceleni futhi uguqule idatha. Ungavimbela amakheli we-IP asolisayo ukuqinisekisa ukuphepha kwesayithi lakho kwi-intanethi. Enye indlela ukudala izinkomba, ama-subdirectories, nemithombo yemigwaqo emhlophe, futhi uvimbele yonke imithombo engaziwa.
# 2. Sebenzisa izingxenye eziphambili
Ungavimbela kalula ugaxekile lolimi ngosizo lwezingxenye eziphambili. Yenye indlela emangalisayo yokususa ugaxekile ku-Google Analytics, kodwa lokhu kukhetha kusebenza kuphela uma unedatha ethile yomlando okufanele uyinakekele. Kuyindlela evikelekile kunokudala izihlungi futhi kusiza ukushintsha idatha ku-Google Analytics yakho. Kumelwe nje usebenze yonke into nayo yonke imithombo yolwazi ongenayo ithemba. Kodwa-ke, uma ngabe usebenzisa izihlungi ezihlukile kwamakheli e-IP ahlukene, kufanele udale izingxenye zabo bonke esigabeni somlawuli se-Google Analytics yakho.
# 3. Sebenzisa uhlu lwesithathu
Ukuvimbela ugaxekile lolimi ngezinhlu zangaphandle kungenzeka. Lokhu kungaba isikhathi esiningi, kodwa imiphumela ihlale ihle kakhulu. Udinga ukubuyekeza izihlungi zakho kanye namagceke njalo ukuze uqinisekise ukuthi uthola idatha enembile kakhulu kwi-intanethi Source .